MIBVUNZO | Songz Mota Inodzora Mhepo Co., Ltd.
1. Kunze kwezvigadzirwa zvakanyorwa muwebhusaiti, pane chero zvimwe zvigadzirwa zvemhepo zvinowanika mu SONGZ?
Ehe, isu tine zvigadzirwa zviripo zvakare zvemarori air conditioner uye emagetsi kupaka inotonhorera, ndapota nyorera ne sales@shsongz.com kuti uwane rumwe ruzivo.
2. SONGZ yakatanga rini R&D yemagetsi bhazi remhepo chinodzora?
Takatanga iyo R&D pamberi pa2009, uye muna2010 gore rekutanga takapa zvikamu zve3250 kumusika. Mushure meizvozvo, huwandu hwekutengesa huri kukura gore rimwe nerimwe uye kurova pamusoro pe28737 muna 2019.
3. Ndezvipi zvinhu zveSMC?
SMC (Sheet Mounding Compound) inoumbwa nezvinhu inoumbwa nekukwirira tembiricha kamwechete kuumbwa, ine yakakwira michini simba, mwenje uremu zvinhu, ngura kuramba, hupenyu hwakareba sevhisi, yakasimba yekudzivirira simba, arc kuramba, murazvo unodzora, wakanaka chisimbiso mashandiro, uye chinoshanduka chigadzirwa dhizaini, iri nyore kuyera kugadzirwa, Uye ine zvakanakira kuchengetedzeka uye runako, neese-mamiriro ekunze ekudzivirira basa, ayo anogona kusangana nezvinodiwa zve nharaunda dzakasiyana dzakaomarara uye nzvimbo mumapurojekiti ekunze enjiniya.
SONGZ inotora zvinyorwa zveSMC muvharo rebhazi air conditioner muSZR uye SZQ dzakateedzana, kutora chinzvimbo chegirazi regirazi.
Kufananidza pakati peSMC & Fibhi girazi Kavha
Maitiro erudzi Maitiro ekugadzira zvinhu zvinoumbwa zvakanyanya nekushandisa kwemaoko pasi pekupisa nekumanikidza. Maitiro acho ari nyore, mashandiro acho ari nyore, hapana michina yehunyanzvi inodiwa, asi kunaka kwezvikamu kunonetsa kuvimbisa Kuomesa kuumba iko kushanda kwekuisa SMC jira-senge kuumba komponi muforoma mhango pane imwe tembiricha yekuumba, uye nekuvhara iyo mold kudzvanya uye kuumba uye kusimbisa. Compression Kuumbwa inogona kushandiswa thermosetting mapurasitiki uye thermoplastics.
Chigadzirwa chepamusoro chinotsvedzerera Smooth kune rimwe divi, uye hunhu zvinoenderana neanoshanda mushandi danho Smooth kumativi ese, mhando yakanaka
Chigadzirwa deformation Chigadzirwa chine huwandu hwakawanda hwekushomeka uye hazvisi nyore kudzora. Iyo inokanganiswa zvakanyanya netembiricha uye mashandiro ekushandisa Iko kushanduka kwechigadzirwa idiki, uye ine hukama hushoma netembiricha uye padanho revashandi
Bubble Nekuda kwekuumbwa kwemaitiro, ukobvu hunotemerwa nenhamba yematehwe akaomeswa, zvidimbu hazvisi nyore kupinza, matubvu haasi nyore kubvisa, uye matubvu ari nyore kuburitsa. Ukobvu hunotsanangurwa neiyo huwandu hwekudyisa uye fomu. Nekuda kwetembiricha yakakwira uye yakanyanya kumanikidza kuumbwa, hazvisi nyore kuburitsa matema
Kutsemuka 1. Nekuda kwehuwandu hwakawanda hwechigadzirwa deformation, hazvisi nyore kudzora, uye hazvisi nyore kuisa panguva yekumisikidza.2. Tembiricha yakadzika inorapa kugadzirwa zvishoma, zvichikonzera kutsemuka padiki pane chigadzirwa chigadzirwa
3. Nekuda kwekuomarara kudiki kwechigadzirwa, iko kusimba kuri kukuru kupfuura iko kwekuumba, uye pendi yepamusoro inowirirana netambo dzakanaka dzechigadzirwa.
Chigadzirwa chacho chakagadzikana, kunze kwekunge simba remuno risingakwani, kushushikana kwekushushikana kunotungamira mukuparara
Kubuda Iko kutanga kwekudyara kwakaderera, kuburitsa kwakaderera, uye haina kukodzera mabatch. Zvinobuda zvinokanganiswa zvakanyanya nenhamba yevashandi uye huwandu hweforoma (3-4 zvidimbu / chakuvhuvhu / maawa masere) Yakakura yekutanga Investment, inokodzera kugadzirwa kwakawanda (180-200 zvidimbu / mold / maawa makumi maviri nemana)
4. Ndezvipi zvinhu zveLFT?
LFT inozivikanwawo seyakareba-fiber-yakasimbiswa thermoplastic kana inowanzo danwa kuti refu-fiber-yakasimbiswa thermoplastic composite zvinhu, iyo inonyanya kuve yakaumbwa nePP ne fiber uye zvinowedzera. Iko kushandiswa kweakasiyana zvinowedzerwa kunogona kuchinja uye kukanganisa michina uye yakakosha maitiro ekushandisa echigadzirwa. Kureba kweiyo fiber kazhinji kunopfuura 2mm. Iyo yazvino kugadzira tekinoroji inogona kutochengetedza hurefu hweiyo fiber muLFT pamusoro pe5mm. Kushandisa tambo dzakasiyana dzakasiyana dzemabhureki kunogona kuwana mhedzisiro. Zvichienderana nekushandisa kwekupedzisira, chigadzirwa chakapedzwa chinogona kunge chakareba kana chakamisikidzwa, imwe upamhi hweplate, kana bhawa, yakashandiswa zvakananga kutsiva zvigadzirwa zve thermoset.
5.Izvakanakira zveLFT zvichienzaniswa nepfupi fiber yakasimbiswa thermoplastic composites
Iyo yakareba fiber kureba inovandudza zvine hungwaru hunhu hwechigadzirwa.
Kukwirira kwakasimba uye kusimba kwakasimba, kwakanaka kusagadzikana, kunyanya kwakakodzera kushandiswa kwezvikamu zvemotokari.
Kuramba kwekukwira kunovandudzwa. Iyo yekudzikama kugadzikana yakanaka. Uye iyo yekuumba chaiyo yezvikamu zvakakwirira.
Kunaka kuneta kuramba.
Iyo ine kugadzikana kuri nani mukukwirira kwetembiricha uye nharaunda ine mwando.
Munguva yekuumba maitiro, iyo tambo inogona kufamba zvishoma mukuumba muforoma, uye iyo fiber kukuvara idiki.
Iwo LFT zvinhu zvakagamuchirwa mukati mebhazi mhepo kutonhodza yeSZR akateedzana, SZQ akateedzana, uye rakamanikana muviri vhezheni yeSZG akateedzana.
LFT Pazasi Shell yeSZG (Yakamanikana Muviri)